Fampidirana ny orinasa - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
- FANAMBARANA ORINASA -
Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana saron-tava fiarovana manokana kn95, saron-tava ara-pitsaboana, saron-tava sivily azo ampiasaina, manana ny famokarana ara-pitsaboana manokana izahay.
ny mari-pahaizana, efa nandalo ny fenitra fitsapana anatiny izahay Gb2626-2006, fenitra ivelany en149, en 14683, sns.
Ny orinasa dia mampifandray ny R & D, ny famolavolana, ny marika ary ny fivarotana miaraka ho lasa tontolo
orinasa malaza. Avy amin'ny fomba fijerin'ny teknolojia fibre, miditra amin'ny indostrian'ny fahasalamana isika ary manome andiana maska ​​roa azo ampiasaina ary saron-tava kn95 ho an'ny fiarahamonina.
Mahaleo tena mahaleo tena Ekipa R&D
Araka ny fantatsika rehetra, ny fahasimban'ny tontolo iainana dia niteraka ny fahalotoan'ny rivotra sy ny fanimban'ny bakteria. Isan-taona dia olona maherin'ny 20 tapitrisa no maty noho ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny aretina mikraoba manerana an'izao tontolo izao. Ny Gaska dia nanjary vokatra tena ilaina amin'ny fiainantsika. Ao amin'ity globalepidemika ity, ny Mask koa dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny dingan'ny Antiepidemika.
Fahombiazana avo lenta, fampitahana vidiana avo lenta sy avo lenta
Vokatra azo antoka kalitao sy serivisy
Tamin'ny taona 2020, nanomboka nanokatra ny ozinina sarontava ilay orinasa tamin'ny vanim-potoana voalohan'ny valanaretina pesta. Tao anatin'ny cir-cumstances tena sarotra dia nitsangana haingana ny orinasa, amin'izao fotoana izao, saron-tava ankanfuseries no napetraka an-tsena marobe, manome vokatra tsara ho an'ny besinimaro hanohitra ny epi-demic sy hiarovana ny fahasalamana.
- FAMPANDROSOANA ORINASA -
Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd. dia miorina amin'ny fananganana orinasa E6, siansa indostrialy ary valan-javaboary Teknolojia, Distrikan'i Xixiu, Lalan'i Liangliu, Distrikan'i Xixiu, Tanàna Anshun, Faritany Guizhou, manarona faritra 3200 m², miaraka amin'ny trano fanatobiana vokatra 409 m², manana atrikasa 2000 m² sy 420 izahay. birao sy faritra onenana m².
Ny orinasanay dia orinasa mampiditra R&D, endrika, famokarana ary fivarotana. Tapa-kevitra ny hanome ny mpanjifanay serivisy tsara indrindra.
An Shun AKF Medical Technology Co., Ltd.Ny orinasa vaovao eo amin'ny sehatry ny sarontava, Avy amin'ny fisafidianana sy fividianana fitaovana ka hatramin'ny fanaovan-tsonia ny fonosana, sy ny fisafidianana ny masinina, sns, izahay dia mamaritra fa ny tsara indrindra amin'ity orinasa ity .
Tokony ho azontsika antoka fa ny saron-tava rehetra novokarintsika no tsara indrindra amin'ity-dustry ity. Avelao ny mpampiasa AKF rehetra hahazo ny fiarovana tsara indrindra.
- Sarintan'orinasa -
Amin'izao fotoana izao, ny vokatra saron-tava Runbo dia hita amin'ny maro
firenena sy faritra eran'izao tontolo izao ,, ao anatin'izany i Eropa, ny
Etazonia, Alemanina, Royaume-Uni, Aostralia, Rosia, HongKong, sns. Ny orinasanay dia nitana andraikitra lehibe nandritra ny vanim-potoanan'ny teepidemika, Manantena izahay fa ho betsaka ny mpiara-miasa amiko